जसले जीवन रसिलो र आनन्दित बनाउँछ::Hamro Koshi Awaj / awaz
जसले जीवन रसिलो र आनन्दित बनाउँछ
व्यक्तिको मष्तिष्कमा आउने अर्थात् उत्पन्न हुने विचार माथिको अनुभूति कस्तो ? सकारात्मक कि नकारात्मक ? जुन बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ । विचारमाथिको अनुभूति आर्जित पहिचानप्रतिको दृष्टिकोणमा निर्भर गर्छ । जसले व्यक्तिको मनोवृत्ति तय गर्छ । अनि मनोवृत्तिले मनको स्थिति बताउँछ । मनको वर्तमान स्थिति कस्तो छ ? भावनात्मक कि स्थिर ? यसले व्यक्तिको कार्य सम्पादनमा प्रभाव पार्दछ । त्यसैले असल कार्य सम्पादनका लागि असल विचार चाहिने भएकोले वुद्धिको महत्व अनिवार्य बोध गर्नुपर्छ ।
हरेक व्यक्ति जागृत अर्थात् चेतनाको अवस्थामा हुनुपर्छ । यो अवस्थामा व्यक्तिले आर्जित भावनाको कारणले आफ्नो मनभित्र कस्तो प्रकारको विचार चलिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छ । हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने हरेक एक विचारले मनभित्र विचारहरुको श्रृङ्खला निर्माण गर्दछ । जसले व्यक्तिको दैनिक जीवनलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले हरेक व्यक्तिले आफ्नो भावना र मन कस्तो हुनुपर्छ ? उसको वुद्धिले अनिवार्य बुझ्नुपर्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने कुनैपनि विचार आफैमा सही वा गलत हुँदैन । यो व्यक्तिको स्वार्थी अनुभव वा अनुभूतिले निर्धारण गर्छ र सोही अनुसार व्याख्या गर्न लगाउँछ । यसको आधारमा व्यक्तिले आफूलाई सम्मान वा अपमान महसुस गर्छ । त्यसैले अनुभूति असल बनाउने हो भने असल सोचाइको विकास गर्नुपर्छ ।
मन, वुद्धि र भावनाबीचमा सन्तुलन कायम राख्न सक्नुपर्छ । पहिचानमा होइन कर्ममा विश्वास राख्नुपर्छ । यसले मनोविकारलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्छ । यसले व्यक्तिको हेर्ने नजरिया राम्रो बनाउँछ । चञ्चल मन स्तःस्फूर्तरूपमा स्थिर बन्न पुग्छ । जीवनको महत्व बोध हुन्छ । जवाफदेहिता बढेर जान्छ अनि विस्तारै समाजमा व्यक्तिको असल परिचय निर्माण हुँदै जान्छ । जसले जीवन रसिलो बनाउँछ । आनन्दित बनाउँछ । लेखकः धरानका निजी शिक्षालयका अध्यापक हुन् ।